Women nwere ike ugbu a na-eme na-ete ime ofụri ime na New York | Apg29
Otu ụbọchị, ọbara ọnwa na-achakwa nke elu-igwe n'elu New York, we were obodo ahu, na i nwere ike ugbu a igosi na-ete ime na-emetụta ke nwaanyị ahụ dum ime.
Matthew 24:37 - N'ihi na dị ka ụbọchị Noa dịrị, otú a ka Nwa nke mmadụ na-abịa. Dị ka ndị dịrị ndụ tupu iju mmiri ahụ ha na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ịlụ nwaanyị na enye di na nwunye, ruo ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ ahụ; + ha amaghị ihe ọ bụla ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara wee kpochapụ ha niile pụọ - mere ga-abịa na nke Ọkpara na-.
Mgbe Jizọs buru amụma na e buru amụma a ga-eme n'ọdịnihu na-agwụcha, wee jiri ya tụnyere oge Jizọs laghachiri ke usen banyere Noa na Lọt. Jesus ekwuwapụta na nke a ga-eme n'ọdịnihu nchupu ga-abịa tupu ụfọdụ ọnọdụ a ga-zutere. Anyị ga ndị ọzọ okwu-enwe ike ịmata mgbe Jizọs afiak site ele ụbọchị Noa, nke anyị nwere ike iji tụnyere oge anyị, ma si otú ike ịhụ na njedebe oge mgbe. N'ihi na dị nnọọ ka ọ bụ na ụbọchị Noa, ọ ga-ọzọkwa ibu tupu Jizọs abịa ọzọ, na ikpe Chineke ga-esi n'elu ụwa.
The mmehie ákwá ka Chineke
1 Gen 6: 5 - Jehova hụrụ na ihe ojo nke mmadụ dị ukwuu n'ụwa, nakwa na obi ha niile na echiche na ebumnobi gị mgbe niile bụ naanị ihe ọjọọ mgbe niile.
Sin "na-eti" n'iru Jehova, na Jehova hụrụ a ọgbọ rụrụ arụ. Noah onwe ya nwere ike ịhụ ji anya otú ihe ọjọọ mụbara, oleekwa otú nke ụwa ghọrọ esiwanye rụrụ arụ. Ụwa mesịrị jupụtara n'ime ihe ike, na nwoke ọfọnde. Dị nnọọ ka ụbọchị Noa, otú akpọku mmehie, anyị na-ebi ndụ a ọgbọ nke a ọgbọ rụrụ arụ.
Anyị na-eche na-ahụ a ọha mmadụ na-na-steeped na-eme ihe ike, na Internet bụ ịgba ihe a na-ejikarị ogologo ebe e ehichapu. More na ndị ọzọ na mba-enye edina ụdị ohere nke inweta ngọzi Chineke na chọọchị, na banyere 200 nde mmadụ n'ụwa taa na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Ebe ọ bụ na Sweden ẹkenam ugbu a iwu 1974, e nwere ndidi n'etiti 30,000 ka mmadụ 37,000 ime n'afọ ọ bụla. Ọ na-enye onye na mkpokọta ọtụtụ banyere 1.3 nde abortions naanị Sweden ebe ọ bụ na 1974. Na uwa elu mere ka ọ na-eme atụmatụ 50 nde abortions n'ụwa kwa afọ.
N'ime ndị a, fọrọ nke nta ka 30 nde iwu na 20 nde n'uzo na ezighi ezi ete ime ahụ. The ọnụ ọgụgụ nke ndị abortions n'ụwa bụ ebu, na ọtụtụ n'ime ha bụ iwu, ikike ahụ okowot nke ụmụaka ebu n'afọ, na-aghaghị ịbụ otu n'ime anyị nnukwu ụbọchị árú, na otu onye nke mmehie na-eti mkpu n'ihu Jehova.
Ime ofụri ime
Otu ụbọchị, ọbara ọnwa na-achakwa nke elu-igwe n'elu New York, we were obodo ahu, na i nwere ike ugbu a igosi na-ete ime na-eme na nwaanyị ofụri ime, ma ọ bụrụ na a ga-enwe a n'ihe ize ndụ ka ndị nne ahụ ike. Na mbụ, iwu na New York, kwere ime ka 24 izu nke afọ ime na otu n'usoro ochichi. Ugbu a ọ pụtara, ị nwere ike họrọ Abort a nwa, ata mụọ ma ọ bụrụ na ọ na-ekwere na ọ pụrụ ịbụ ihe ịma aka maka nne ya.
Ọ bụrụ na i nwewe obi abụọ na anyị bi n'oge ikpeazụ, anyị nwere ike na-ele anya ruo, ma, lee n'elu ọgbọ anyị na-ebi taa. Amụma Jizọs buru banyere Noa na Lot, onye ọzọ ga-adị, na-ewe ebe tupu anyị anya. Ọ bụ ihe yiri ajọ omume nke ụbọchị Noa, bụ nke mere ka Chineke bibie mgbe ụwa, ma o chebere Noa.
M na-eche otú ahụ, ọ bụ ndị doro anya mmehie na ihe ọjọọ anyị na-enwe taa, nke ga-ịkpalite Jehova nloghachi. Anyị bụ ndị Noah ọgbọ na anyị bụ ndị ga-ahụkwa nzọpụta nke Ibé akwụkwọ mere site na owuwe, na domstid onye ga-aga nke ụwa a.
Vecka 22, måndag 27 maj 2019 kl. 15:56